Chiremba anesthesia powder series suppliers - AASraw powder
Chiremba anesthesia series
Chiremba Anesthesia powder
Isu Anesthesia powder vaperesi, Chiremba anesthesia poda yekutengesa, Sezvatavimbisa, yese yeArape aneshehesia powder ine uchena kunze kwe98%.
Anesthesia powder Kazhinji Description
Muitiro wekurapa (kunyanya kuvhiyiwa uye mazinyorero), anesthesia powder kana anesthesia inzvimbo yechinguva inokonzerwa nekurasikirwa kwekunzwa kana kuziva. Inogona kusanganisira analgesia (kuburitsa kubva kana kudzivirira kurwadziwa), kuora mwoyo (musuru yekuzorora), amnesia (kurasikirwa kwechirangaridzo), kana kusaziva. Murefu ari pasi pemigumisiro yemishonga inopesana nehutachiona inotumidzwa seanesesthetized.
Anesthesia powder inogonesa kushanda kunorwadza kwehutano hunoita kuti kurwadziwa kwakanyanya kana kusingagadziriswi kune murwere asina kubatana. Zvikamu zvitatu zvakakura zvikamu zveanesthesia zviripo:
Jenesi anesthesia powder inoderedza hutachiona hwehutano hwemabasa uye inoguma mukusaziva uye kusakwana kwekunzwa.
Sedation inoderedza hurumende yehurumende yepamusoro-soro, kudzivisa kuzvidya mwoyo uye kusika kwezvenguva refu zvinorangarirwa pasina kukonzera kusaziva.
Regional anesthesia powder uye munharaunda yeanesthesia, iyo inodzivirira kutenderera kwemashupa emutsipa pakati pechikamu chinotarisirwa chemuviri uye nheyo yepamusoro yenheyo, zvichikonzera kurasikirwa kwekunzwa mumutumbi wakatarwa chikamu. Mumwe murwere pasi penharaunda kana munharaunda anesthesia powder anoramba achiziva, kunze kwekuti mukuru we anesthesia kana sedation ari kutungamirirwa panguva imwe chete. Makira maviri akafara aripo:
Chirwere chepachiviri chinopesana nechinangwa chekunzwisisa mune imwe nzvimbo yakasara yemuviri, zvakadai sokupinza zino kumabasa emazino kana kuisa musungo wekudzivirira kudzivisa kunzwa mukati memutsipa wose.
Central, kana neuraxial, kuvharidzira kunotungamirira kushanda kwemasimba munharaunda yenheyo yenheyo pachayo pachayo, kudzvinyirira manzwiro anouya kubva kunze kwenharaunda. Mienzaniso inosanganisira epidural anesthesia uye spinal anesthesia.
Mukugadzirira kurapwa kweutano, mutapi wehutano anopa anesthesia anosarudza uye anogadzira doses reimwe kana kuti mamwe madhiragi kuti awane maitiro uye chirwere cheanesthesia zvinokodzera kune rudzi rwehutano uye murwere chaiye. Mhando yemishonga inoshandiswa inosanganisira general anesthetics, hypnotics, sedative, neuromuscular-kudzivirira zvinodhaka, narcotic, uye analgesics.
Iko kune matambudziko makuru uye maduku eesesthesia. Mienzaniso yezvipingamupinyi zvikuru zvinosanganisira kufa, kurwadziwa kwemoyo uye kuputika kwemapurmine asi njodzi duku dzinogona kusanganisira kushanda kwemashure kunokonzera kushungurudza uye kurutsira nekuverengera kuchipatara. Mikana yezvinetso zvinowanzoitika zvinoenderana nehuwandu hwehutano hwezvinhu zvakasiyana-siyana zvine chokuita nehutano hwomurwere, kuoma kwekuvhiyiwa kunoitwa uye rudzi rwekushaya maitiro anoshandiswa. Nezvizvi, hutano hwemunhu asati avhiyiwa (yakarongedzwa neAAA mumuviri wehutano hwemagadziriro ehurumende) hunova nekutakura kukuru pamusana wezvimwe zvinenge zvichiitika. Varwere vanowanzovhara mukati memaminitsi echinhu chinogunun'una chinopedzwa uye vanodzokorora pfungwa dzavo mumaawa mashoma. Chimwe chinhu chisingazivikanwi chiitiko chinonzi long-term postoperative cognitive dysfunction, inoratidzirwa nekusingaperi kwemavhiki mashoma kana mwedzi, iyo inowanzoonekwa kune avo vari kuitirwa chirwere chepfungwa uye kune vakwegura.
Ndeipi mhando dzeanesthesia powder?
Local anesthesia numbs chikamu chiduku chemuviri zvishoma. Semuenzaniso, unogona kuwana mishonga yemishonga zvakananga munzvimbo yekuvhiya kuti ubvise marwadzo. Iwe unogona kuramba wakamuka panguva iyo.
Regional anesthesia powder inodzivisa kurwa kune chikamu chikuru chemuviri wako. Iwe unogonawo kuwana mishonga kuti ikubatsire kuporesa kana kurara. Nzvimbo dzenharaunda anesthesia powder dzinosanganisira:
Peripheral nerve blocks. Iyi iduro rekushaya manzwiro ekudzivirira marwadzo kumativi ose ane nerve kana boka remashu. Mabheji anowanzoshandiswa pamitemo pamaoko, maoko, tsoka, makumbo, kana chiso.
Epidural and spinal anesthesia powder. Uyu ndiwo mutsara wekushongedzwa kwemvura pedyo nemutsara wepelinha uye mitsipa inosangana nayo. Inodzivisa marwadzo kubva munzvimbo yose yemuviri, zvakadai sedumbu, chiuno, kana makumbo.
Kazhinji anesthesia powder inokanganisa uropi hwako uye muviri wako wose. Iwe unogona kuwana anesthetics kuburikidza nemuviri (intravenously, kana IV), uye iwe unogona kufema mune imwe anesthetics. Uine aneshehesia powder, hauzivi uye haunzwi kurwadziwa panguva yekuvhiyiwa.
Ungadzikisa sei njodzi yako yemigumisiro?
Chinhu chinonyanya kukosha chaungaita kuti udzivirire aneshesia powder nemigumisiro ndeyekuti chiremba anesthesiologist inobatanidzwa mukutarisira kwako. Mumwe chiremba anesthesiologist chiremba anonyanya kushandisa anesthesia powder, kutarisira kurwadziwa uye mushonga wokurapa.
Usati wavhiyiwa, sangana nachiremba anesthesiologist kuti ukurukure nhoroondo yako yezvechiremba, tsika dzoutano uye mararamiro. Iyi ruzivo ichabatsira chiremba anesthesiologist kuziva kuti ungagone sei kune anesthesia powder uye utora matanho ekuderedza ngozi yako yemigumisiro. Iyi musangano ihwowo nguva yakanaka yokuti iwe ubvunze mibvunzo uye dzidza kuti chii chaunotarisira.
Kuti uwane zvakakosha zvinyorwa kubva kumutengesi akakodzera zvinoreva zvakawanda, kukusimbisa huri nani, hurumende yekugovera uye yese-shure kwekutengesa.
Kuratidza zvese 1 mhedzisiro